Umthandazo kwimali Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Kwinqaku elilandelayo siza kukuxelela indlela yokwenza ifayile ye umthandazo kwimali kwaye uthandaze kubani ucele eso sibonelelo ngamanye amaxesha sijika ubomi bujike phantsi.
Ngale mithandazo uya kuba nemali
1 Ndiwunikela kubani umthandazo wam emalini?
2 Umthandazo kwimali
2.1 Umthandazo kuThixo nakwingelosi enkulu u-Uriel
2.2 Umthandazo wemali kunye nobuninzi beengelosi ezinkulu u-Uriel
2.3 Umthandazo kuSan Pancracio
Ndiwunikela kubani umthandazo wam emalini?
Xa sikwimeko apho sidinga imali ngokungxamisekileyo kwaye singazi ukuba singayisombulula njani ingxaki zethu, asinakho ukucela imali-mboleko, kwaye asinaye umhlobo okanye isihlobo esinokusinika imali, sikhetha ukuthandaza. Kodwa yeyiphi ingcwele endinokuya kuyo?
Abantu bathi, ISan Pancracio UyiNtloko yethamsanqa, owenza ubabalo ngokukodwa kwimeko yemali. ISan Pancracio iya kukunceda ufumane loo msebenzi uwufuna kakhulu, iqabane lakho, abathengi, umsebenzi kunye nempilo.
Kwangokunjalo, kukho ingelosi enkulu u-Uriel ophethe ukusasaza inyaniso nobulumko kumakholwa athembekileyo, ke uya kukunceda ukwazi ukuphatha iimpahla zakho ngokubonisa, uya kukunceda ukuze loo mali uyifunayo ifike ngaphandle kwenkxamleko kunye nemvelaphi elungileyo.
Kwangokunjalo, Konke oku kufuneka kukhatshwe zizipho ezivela kuThixo weNkosi yethu, akufuneki silibale ukuba yiyo enika thina kwaye iyasithatha kwaye ukuba sihamba nobunzima obunje kuthetha ukuba kufuneka sifunde into ethile. Siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku umthandazo wokuhlawulwa imali Ukuba ityala lakho kukuba umntu unetyala kuwe, akakuhlawuli.
Ingelosi eyintloko u-Uriyeli
Umthandazo kuThixo nakwingelosi enkulu u-Uriel
Nkosi Somandla Thixo ezandleni zakho siyakuhlangula oku umthandazo wemali kunye nobuninzi obunamandla.
Ngokucela ukuba usivumele iseva yakho,
Ingelosi enkulu yothando u-Uriyeli ungene ebomini bethu,
ukuzisa isibonelelo esivela kuwe,
imali, intabalala, impumelelo,
impumelelo, ubulumko, ubutyebi kunye nokuba sempilweni
kwimisebenzi yethu nakukhuseleko lwabo olukhethekileyo.
Ngoku sihambisa zonke izinto ezisixhalabisayo ezandleni zakho.
Ndiyabulela Bawo ngokusoloko usecaleni kwam. Ndiyabulela Nkosi yam.
Umthandazo wemali kunye nobuninzi beengelosi ezinkulu u-Uriel
Umthandazo wale ngelosi inkulu uqala ngo "Sithandwa nesinamandla iNgelosi eyintloko u-Uriyeli", ke nabani na ofundayo makazazise ngegama lakhe kwaye aqhubeke nokucela ingelosi eyintanda egameni likaThixo, uyacelwa ukuba asigubungele ngezipho okanye ubuhle bakhe. .
Umthandazo uyaqhubeka nesicelo sobulumko kumntu obubonakalisayo, kodwa sikwacelwa ukuba usincede siqonde iimeko ezithile ezenzeka ebomini bethu nalapho sikholelwa ukuba asinasisombululo. Kungenxa yoko le nto sithetha nesiphatha-zingelosi siqinisekile ukuba simcele ukuba asincede sifezekise uxolo olunqwenelekayo kwaye ayisiyiyo eyedwa kuphela, kodwa ikwacelwa lihlabathi liphela, ngabantu, ngayo yonke into.
Kuyabulelwa kakade, kuba oku akunakuphoswa; unombulelo kuba emamele kuthi, kuba imithandazo yethu kunye nezinto ezisixhalabisayo ziza kuye. Ngokunjalo, uthotho lwamabinzana anje ngala "ndigqibelele ngobuninzi" ayaphindwa, kunye nezinye ezifanayo eziqinisekisa ukomelela kwethu, kunye nomnqweno wethu wokuba ngabantu abangcono imihla ngemihla, ukuba babe kukukhanya ukoyisa ubumnyama kwaye yenze icace ukuba siphumelele.
Kwinxalenye yesivakalisi kuya kufuneka uxolise kwiingelosi zengelosi ukuba ukhe wazikhaba izinto zemali, ukhanyele ukuba awunako ukugqitha okanye intabalala njengabanye ukuba babenethamsanqa lokuba nalo. Kwangokunjalo, bayaxolisa ngokugweba ngendlela engalunganga bonke abo bantu babonwabele okanye bonwabela intabalala yezoqoqosho.
Ngale ndlela, into esifuna ukuyiphumeza kukuba sikwazi ukushiya ngasemva lonke ucalucalulo olubeke umbono wethu malunga nobutyebi kwaye sibe nombulelo ngakumbi ngobomi, noThixo, kunye nengelosi yethu enkulu. Sinombulelo ngento nganye yepropathi okanye akunjalo, ekufuneka siyifumene ukusukela ngalo mzuzu uthandazelwa lo mthandazo kwaye sikwacela, zonke iimpazamo okanye iintsilelo ezinokubakho zisuswe kuthi.
Isivakalisi siphela ngokubhekisele kumandla infinito Ingelosi enkulu, ngubani oye wakwazi ukusinceda sivule iintliziyo zethu kwaye sifumane umbono ongcono ngobutyebi. Ukuvala isivakalisi ngesi siqwenga silandelayo:
Enkosi ngokuhlaziya ubomi bam ngothando oluninzi novuyo,
iintsikelelo endiya kuzabelana ngazo nabo bonke abantu abandingqongileyo
njengombulelo kwinto yokuba uhlala, phantsi kwentando yakho,
ukusukela ngoku ukuya phambili nangokuseleyo kobomi bam,
Ndiza kuba nemali, izinto eziphathekayo kunye nokomoya.
Enkosi bawo ngento esele ikho!
Umthandazo kuSan Pancracio
Othandekayo nothobekileyo uSanta Pancracio
Kuba iNkosi yezulu imamele ngononophelo kwimithandazo esiyibhekisa kuwe, isinceda ngokwasemoyeni ngawe kunye nabo banoxabiso ngongenelelo lwakho ebomini babo.
Mamela esi sicelo ndikuphathele sona:
(Faka isicelo sempilo yakho, impilo-ntle yakho okanye ukuzikhusela kwakho, njl.)
Ndiphakamisa lo mthandazo kuwe, Saint Pancracio, ukuze undithethelele phambi koThixo kwaye iimfuno zam zingafezekiswa ngokukhawuleza.
Ukongeza, ucele ukukhuselwa okungcwele kum kunye nosapho lwam kuba ndiyazi ukuba uThixo uyakuvuyela ukunceda abo bamlandelayo.
Othandekayo nothobekileyo uSanta Pancracio, ndincede ngamandla akho kunye nothando ngoYesu, ndinike ukucaca kunye novuyo ukuthanda usuku ngalunye ngakumbi.
Sithandwa sikaSanta Pancracio ndifundise ukuba ndimthande uThixo njengoko usishiyile umzekelo wokuba umthande ngokuchanekileyo unyana wakho uYesu Krestu uMhlawuleli wethu kunye noBawo ngokwakhe.
Ke ngoko, ngale mithandazo mithathu siyakuqinisekisa ukuba imali iza kuza kuwe ivela kumthombo olungileyo kwaye iya kukunceda ukusombulula ezo ngxaki zikukhathaza kakhulu. Kwangokunjalo, siyakukhumbuza ukuba ukuze le mithandazo iqale ukusebenza, kufuneka uyizalisekise, ubuze uThixo kwiNkosi yethu kunye neNtombikazi enguMariya.
Kwangokunjalo, umthandazo ngamnye kufuneka wenziwe ngokholo olukhulu, kwaye ubone ukuba iimfuno zakho ziya kuhoywa kwaye ziya kukunceda kukungazinzi kwezoqoqosho.